Calaamadaha – somali
Calaamadah qaaxadu waxa ay ku soobixi karaan ayaar aayar habka ay u soo cadaanaysaana waa kala duwanyahay.
Calaamadah u gaarka ah xanuunka qaaxada waa qufaca jira mudo ka badan sedex todobaad, xaako uu soo tufo. Qofka bukaa waxa uu yeelan karaa xummada, miisaakan oo dhaca, habeenkii oo uu aad u dhidido. Qofku waxa uu dareemi karaa tamardaro iyo cuntada oo uu nafsad u waayo. Waxa kale oo jirikara calaamado kale oo ku xidhan kolba qaybta ay jidhka ku dhacdo.
Calaamaduhu waxa ay soo baxaan ayar ayar. Bilowga calaamaduhu aad uma muuqdaan. Waqtiyada qaarkood calaamado ma jiraan haba yaraatee. Sikastaba ha ahaatee caruuta yar yari waxa ay u bukoon karaan si halis ah iyo si degdega.
Calaamadahaasi waxa ay ka imankaraan sidoo kale dibaatooyinka kale ee cafimaadka. Waxa jira baadhitaano loo isticmaali karo si loo cadeeyo in ay sabatay cudurka qaaxadu. Qofka lagu arko mid ama in ka badan oo calaamadahaasi waa in uu dhakhtar la xidhiidhaa.